सर्वनाममा ‘पिँजडाको चरी’::News from Nepal
सर्वनाममा ‘पिँजडाको चरी’
काठमाडौंको सर्वनाम थिएटरमा नाटक ‘पिँजडाकी चरी’ मञ्चन भईरहेको छ । नेपालमा केहि समयअघिसम्म रहेको कमलहरी प्रथामा आधारित नाटक थिएटर डेला अर्डिनेर फ्रान्सका निर्देशक म्याक्सिम सिसडले करिब एक महिनाको कार्यशाला पश्चायत सर्वनामका कलाकारहरुसँग मिलेर तयार पारेका हुन् ।
विशेषगरी पहाडिया हुनेखाने शोषकले सोझासिधा थारुहरुलाई दाषी बनाएर कमैयाको रुपमा काम गर्न लगाएर शोषण गरेको तथ्यलाई निर्देशकले नाटकमा उतारेका हुन् । करिब १ घण्टा तीस मिनेट लामो नाटकबाट सन्देशमात्र हैन प्रशस्त मनोरञ्जनसमेत प्राप्त हुन्छ । कलाको कुनै भाषामा नहुने भन्दै सिसडले नेपाली कलाकारसँग नेपाली नाटक बनाउन पाउनु भनेको आफ्नोलागि सौभाग्य भएको बताए । आफू फ्रेन्च भाषी भएपनि नेपाली भाषामा नाटक बनाउनु सबैभन्दा चुनौति भएपनि कलाकारहरुको सहयोग र बुझाइले नाटक बनाउनमा सहज भएको बताए । त्यस्तै सर्वनामका निर्देशक अशेष मल्ले रंगमञ्चको कुन‌ै देश हुदैन, अलग अलग भाषा हुदैन राजनैतिक सीमाना नहुने बताउदै सर्वनाम र यहाँका कलाकारलार्इ सिकाइको नयाँ अनुभव थपिएको बताए ।
नाटकमा मनोज महर्जन, भूमिका थारु, सुनिता बाडे र पाश्लाक्पा शेर्पाको अभिनय रहेको छ। त्यसैगरी नेपथ्यमा आरुषजंग सारु र कृष्ण गोपाल कक्षपती रहेका छन् । स्टेज म्यानेज्मेन्ट आदित्य शर्माले गरेका हुन् भने सञ्चार संयोजनमा मोहन अभिलाषी र क्षितिज समपर्ण रहेका छन् । प्रकाश परिकल्पना रुपेन्द्र शिवाकोटीले गरेका हुन् भने प्रकाश परिचालनमा धिरज थापा मगर, ध्वनी परिचालनमा आशिष काफ्ले रहेका छन् ।
नाटक बिहिबार बाहेक हरेकदिन साँझ ५ बजे र शनिबार अतिरिक्त शो १ बजेपनि मञ्चन हुनेछ । नाटक फागुन ४ गतेसम्म चल्नेछ ।
पार्टी एकताको फलामे ढोका फोरिदिएका छौं ः प्रचण्ड
संविधान कार्यान्वयन हुने गरी सरकारले कानुन निर्माण गर्न सकेन : डा. भट्टराई
राष्ट्रपतिको चिन भ्रमणका लागि जहाज भाडा एक करोड ६५ लाख
कस्तो हुन्छ आज देशभरको मौसम?
सरकारले तोकेको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई बर्खास्ती
अचम्म ! एक विद्यालयका ७ शिक्षिका एकैपटक गर्भवती
अमेरिकाको केन्सासस्थित गोडार्डको एक प्राथमिक स्कूलमा एक अनौठो स्थिति सिर्जना भएको...
हजुरबुबाको विवाहमा नाति नातिना जन्त गएपछि……
६१ वर्षीय एक व्यक्तिले आफूभन्दा झण्डै १६ वर्ष कम उमेरकी महिलासँग...
पार्टी एकताले नेकपाका यी ८ भाइको बिजोग
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा को केन्द्रीय कमिटी एकता हुँदा केन्द्रीय सदस्य...
नारायणकाजीले ओली प्रचण्डलाई तानाशाही भने पछि ..
आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले ७७ वटै...
फिलिपिन्सको राजधानी मनिलामा समेत धक्का महसुस हुनगरी उत्तरी फिलिपिन्सको जाम्बालेसलाई केन्द्र...
नेकपा पार्टी एकता पहिलो गाँसमै ढुङ्गा
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले अन्तत अबरुद्ध पार्टी एकताको गाँठोलाई फुकाएको...
कांग्रेसका नेताहरू राजतन्त्र फर्काउने सपना देखेर हिँडेको देख्दा मलाई ताजुब लाग्छः प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं– प्रधानमन्त्री एवम् नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल...
पशुपतिनाथ मन्दिरको पुजारीको मासिक तलब मात्रै २ लाख ३५ हजार, केहि रोचक तथ्यहरु
पशुपतिनाथको मन्दिर काठमाडौँ जिल्लामा रहेको ऐतिहासिक धार्मिक एवम् पर्यटकीय दृष्टिले महत्वपूर्ण...
नेपाली स्याटलाइटबारे भर्खरै आयो यस्तो खबर
काठमाडौं । नेपालले पहिलोपटक प्रक्षेपण गरेको आफ्नै भूउपग्रह ‘नेपाली स्याटलाईट वान’...
फेसबुक बन्द !
काठमाडौं । श्रीलंकामा सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेको छ। आइतबार भएको...